အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး 10th World Renewable Energy Technology Congress နှင့် 3rd World Water Summit 2019 သို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း – Ministry of Foreign Affairs
အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး 10th World Renewable Energy Technology Congress နှင့် 3rd World Water Summit 2019 သို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း
(၂၂-၈-၂၀၁၉ ရက်၊ နယူးဒေလီမြို့)
အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့ Convention Centre-NDCC ၌ ၂၁-၈-၂၀၁၉ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် 10th World Renewable Energy Technology Congress နှင့် 3rd World Water Summit 2019 အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားဖွင့်ပွဲတွင် အိန္ဒိယအစိုးရ၏ Ministry of New and Renewable Energy & Power ဝန်ကြီးဌာန၏ ဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr.R.K.Singh မှ အထူးမိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပြောကြားခဲ့သည့်အပြင် အထူးဧည့်သည်အဖြစ် အိန္ဒိယအစိုးရ၏ Ministry of Jal Shakti မှ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီး H.E. Mr.Gajendra Singh Shekhawat မှလည်း အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲများသို့ နိုင်ငံတကာမှပညာရှင်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် သံတမန်များလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။